Ra’yi: Soomaali aragtaa yaab aragtaa – Balcad.com Teyteyleey
Soomaalida buufiska hayaa waa mid la yaab badan oo ay sababeen, We’ve got the most cost effective deals for medicines you can find! You can get Gasex only for 55.75 USD right away! hagayaanna dad cod dhaadheeraa ilaa burburkii, ha ahaatee aan garaneyn waxa ay ka hadlayaan. Mar dadka waddamada deriska ah lagu jeediyo iyo caalaamka guud ahaanba, mar nin janaraal ah oo Itoobbiyaan ah dal iyo dad dhan lagu xuuxiyo oo xataa qaar doorashada ku soo galaan in ay janaraalkaas dalka ka saarayaan, iyo marar kale oo badan oo damiinno makarafoon helay ay dadka dhegaha kaga waaleen waxyaabo iyo fahmooyin dunida hadda jirta aan la jaanqaadi karin.
Sawirka hoose ee labada madaxweyne (Itoobbiya iyo Soomaaliya) derbiga ka dambeeya waxaa ku qoran sidaad u jeeddaanba “ WELCOME TO ETHIOPIA, THE LAND OF ORIGINS.” Maadaama buufis weyn ay Soomaalidu ka qabto Itoobbiya waxaa loo qaatay in qoraalka loo la jeedo, Soomaalidu waxay ka soo farcantay oo asal ahaan ka soo jeeddaa Itoobbiya.
Cid kasta oo wax uun u bilaaban yihiin waxa ay og yihiin in marka laga hadlaayo Evolution-ka, la sheego in dadku ka soo farcamay Afrika, gaar ahaan Itoobbiya. Kolka arrintaas ayaa ay Itoobbiya caalamka ugu faantaa kuna sheegataa in ay tahay ” The Land Of Origins” (dhulkii laga farcamay.) Dhulka Cafarta waa tii ay ka heleen lafo ka haray noole dheddigaa oo ay u bixiyeen “Lucy” sinjigeedana ay ku sheegeen Australopithecus afarensis, oo buuxisey marxalad bannaanayd oo ahayd markii afarta addin laga guurayey, oo laba addin lagu socday inta hanqalka la la kacay.
Soomaalidu sidii ay u dhegeysaneysey dadkii iyagu wax dhegeysan lahaa ayey soo baxday wax buufis qaba oo xataa ka sasa qoraal derbi ku yaal. Intii laga cararaayey in Soomaalidu gudaheeda ka xisaabtanto ayaa dhibaato aad u weyn oo aan waayahaan laga gudbi karin, ummaddii lagu markaday.
W/Q Maxamed Aadan Ciiraale